लेन मिच्नु भो ? घरमै फोन आउँछ – Rajdhani Daily
लेन मिच्नु भो ? घरमै फोन आउँछ
तपाईं सडकमा सवारी गुडाउँदा कसरी गुडाउनुहुन्छ ? लेनको पालना गर्नुहुन्छ वा हुन्न ? तर, अब सवारी चलाउँदा लेन मिचियो अथवा लेन अनुशासन पालना गर्नुभएन भने होस गर्नुस्, तपाईंको घरमा नै फोन बज्नेछ ।
ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सवारी दुर्घटना कम गर्न र सवारी चालकलाई अनुशासित बनाउन भन्दै उपत्यकामा लेन अनुशासनको पालनामा कडाइ गरेको हो । यसका लागि महाशाखाले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ‘सर्भिलेन्स भेइकल’ राखेको छ ।
महाशाखाको रेकर्डअनुसार हालसम्म ६३४ जना कारबाहीको दायरामा आएका छन् भने १६८ जनालाई कारबाहीका लागि चिठी काटिएको छ । यस्तै, २५९ जना कारबाहीको प्रक्रियामा छन् भने ८५३ सवारीको अभिलेख ट्राफिक प्रहरीले खोजिरहेको छ ।